Madaxda Sare ee dowladda KMG Soomaaliya oo looga yeeray magaalada Addis abeba ee dalka Ethiopia. | JILYAALE_ONLINE
Madaxda Sare ee dowladda KMG Soomaaliya oo looga yeeray magaalada Addis abeba ee dalka Ethiopia.
Warar aan goor dhoweyd ka helnay magaalada Addis abeba ee dalkaasi Ethiopia ayaa waxa ay sheegayaan in wefdi uu hogaaminayo ra’iisal wasaaraha xukuumada KMG Prof. Cali Max’ed Geeddi ay goor dhoweyd ka degeen magaalada Addis ababa ee dalkaasi Itoobiya.
Ra’isal wasaaraha ayaa waxaa safarkiisan ku wehliya xubno ka tirsan labada gole oo ay ka mid yihiin hogaamiyeyaashii hore ee dagaalka, waxaana ra’iisal wasaaraha ugu yeeray Addis ababa xukuumada Ethiopia iyo madax ka tirsan midowga Afrika oo iyagu haatan halkaasi ku leh shir looga hadlayo arrimaha khilaafaadka dowladda KMG Soomaaliya.
Wararka aan kahelnay magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in wofdi uu hogaaminayo Ra’iisal wasaaraha xukuumada KMG Prof. Cali Max’ed Geeddi uu Saaka barqadii ka ambabaxay magaalada Baydhabo, isagoo ku sii jeeday magaalada Addis abeba ee dalkaasi Ethiopia.
Warku wuxuu intaa ku daray in Guddoomiyaha Baarlamaanka KMG Soomaaliya Mudane Sheikh Aadan Madoobe uu maanta ka sheegay kulankii golaha baarlamaanka Soomaaliya in ay xiriir la soo sameeyeen madaxda dowladda mas’uuliyiinta Addis ababa iyo madaxda Ururka Midowga Afrika ay ku war geliyeen in madaxda dowladda Soomaaliya ay yimaadaan magaalada Addis ababa ee dalka Ethiopia, si loo xaliyo khilaafka u dhaxeeya.
Aadan Madoobe ayaa sheegay in socdaalka Ra’iisal Wasaaraha dartiis muddo labo maalmood ah la hakiyay dooddii ay Mudanayaasha Baarlamaanka ka lahaayeen kala dooraashada labo mooshin oo kala ah in la sii wado Ajende Baarlamaanka horyaalay oo ku saabsanaa la xisaabtanka Xukuumadda iyo in Codka Kalsoonida loo qaado Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Geeddi oo xildhibaannada qaarkood ay ku doodayaan in uu waqtigii ka dhamaaday.
Sidoo kale waxaa lasoo xaqiijiyay in uu Madaxweyne C/llaahi Yusuf aanu u amba bixin magaalada Adiss Abeba ee uu weli kusugan yahay Magaalada Baydhabo.
Si kasta ha ahaatee dadka u kurgela Siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay qabaan in u yeeridda uu u yeeray Meles Zinawe, Cabdullahi iyo Geedi, ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka mid tahay qayb ka mid dhulka Ethiopia, taasoo ay goor hore ugu riyoon jireen Boqorradii iyo Madaxdii soo Xukumi jiray dalka Ethiopia, balse halkaas waxaa laga arki karaa daciifnimada Barlamaanka iyo inay dhamaatay wax la yiraahdo qaran Soomaaliya ay leedahay.
← Sheekh Shariif Sheekh Axmed Guddoomiyaha Isbahaysiga dib u xoreynta Somalia oo iska fogeeyay hadalka Madaxweyne goboleedka Puntland Cade Muuse uu faafiyay.
Wasiirka Arimaha Dibedda Somaliland:- “Waxa nagu ballan ah in Boosaaso iyo Garoowe dhiigu qulqulan doono”. →